Avotra teny an-tanan’ireo dahalo ireo takalonaina (vehivavy iray 41 taona sy ny lehilahy iray 30 taona). Taorian’ny fanarahan-dia nataon’ireo miaramilan’ny holafy faha-322 sy ny zandary ao amin’ny fokontany Bevondrona, kaominina Brieville, Tsaratanàna, afakomaly, ny nahazoana azy ireo. Niafara amin’ny fifampitifirana izany ka naratra ny dahalo roa lahy, saingy mbola afa-nitsoaka.
Vehivavy malagasy iray indray maty tany Koweit, omaly. Fantatra fa nanaraka fitsaboana nandritra ny fotoana elaela tao Farwaniya Hospital any an-toerana izy. Efa nihatsara ny fahasalamany ary nikasa hitodi-doha eto Madagasikara izy kinanjo izao namoy ny ainy tampoka izao indray.
Taorian’ny fonjaben’i Tsiafahy, nitohy omaly teny amin’ny fonjan’Antanimora indray ny famendrahana fanafody nataon’ny Croix Rouge Malagasy. Antony, noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19 tsy hiparitahan’ny aretina amin’ireo voafonja.
Naiditra am-ponja eny Antanimora ny teratany kaomorianina iray antsoina hoe Ainour Mohamed Djamalidine, voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ny tovovavy iray 26 taona hita faty teny Betampona, Carion, ny febroary 2021 lasa teo.